KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): လေဖြတ်ဝေဒနာအကြောင်း သိကောင်းစရာ
အသက်(၈၀)ရှိ အဘိုးအိုက အသက်(၃၃)နှစ်ရှိ လေဖြတ်ထားသူကို ဆေးခန်းသို့ လာပို့ပါသည်။ ထိုအခါက
ရေ ဘယ်အချိန်ချိုးလဲ ?
ရေ တနေ့ ၃-ကြိမ်လောက်ချိုးတယ်၊ ညဘက် ကားမောင်းပြန်လာရင်လည်း ထပ်ချိုးတယ်။ ရေချိုးတိုင်း ခေါင်းက အမြဲရေလောင်းချိုးတယ်။ သမံတလင်းပေါ် အိပ်တယ်။
လေပန်ကာ ခံတယ်။ ကျွန်တော်က ချွေးထွက်သိပ်လွန်တော့ အအေးကြိုက်တယ်။ ရေစိုရေလဲ လုံချည်ကို ခြုံထားတတ်တယ်။ ခင်းအိပ်တတ်တယ်။ ရေဆို ဆေးသောက်တာကအစ ရေခဲရေနဲ့မဟုတ်ရင် မသောက်တတ်ဘူး။
ကျွန်တော်က ဝက်သားကြိုက်တယ်၊ ဘဲကင်လည်း ကြိုက်တယ်။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲဆို မနက်တိုင်း စားတယ်။ ကားသမားဆိုတော့ အပြင်မှာ ကြုံရင်ကြုံသလို ပလာတာ၊ အီကြာကွေး၊ စမူဆာ အပြန်ပြန်ကြော်ပြီးသားဆီနဲ့ကြော်ထားတဲ့ ဆီကြော်မုန့်တွေ မကြာခဏ စားသောက်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တယ်။ အရက်လည်း အနည်းအကျဉ်းသောက်တယ်။
ဒါနဲ့ ဆရာမက လိုက်ပို့တဲ့ လူနာရဲ့ ဖခင် အသက်(၈၀)နှစ်ထိ ကျန်းမာရေး ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေပုံကို ကြုံတုန်းစပ်စုလိုက်ပါတယ်။
အဖေကြီး...ခုလိုကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ဘယ်လို နေထိုင် စားသောက်ပါသလဲ?
မနက်တိုင်း လမ်းလျှောက်တယ်။ စိပ်ပုတီးအကူ မပါဘဲ ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါးကို အမြဲပွားများတယ်။ မနက်ခင်း ထမင်းကို ဘုရင်လို စားတယ်။
နေ့ခင်းစာကို ဆင်းရဲသားလို စားပြီးညဘက်စားစရာမရှိလို့မစားတဲ့သူတောင်းစားလို
ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်က လက်မခံတဲ့အဟာဟူသရွေ့ မစားဘူး။ ငယ်ငယ်ကတည်းက စားဖူးတဲ့အစာမျိုးပဲ စားတယ်။ ခုခေတ်ပေးတဲ့ အချိုရည်နဲ့ ကိုယ်မစားဖူးသေးတဲ့ အသစ်အဆန်း အစာဟူသရွေ့ ရှောင်ပါတယ်။
အစာကို မနက်(၈)နာရီမှာ တကြိမ်၊ နေ့လယ် (၁၂)နာရီမှာ တကြိမ်၊ ညနေ (၄)နာရီမှာ တကြိမ် စသည်ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်မှန် ကျွေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကားဓာတ်ဆီဖြည့်သလို အချိန်မှန် ဆီဖြည့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခုလို အချိန်မှန်တဲ့အတွက် အသက်ရှည်၊ ကျန်းမာတာ ဖြစ်ပါတယ်-လို့ ဖြေပါတယ်။
ဒါကြောင့် လေဖြတ်တယ်ဆိုတာ အသက်ကြီးမှဖြတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဘက်နှစ်တွေမှာဆို အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ လေဖြတ်တာတွေ ပိုများနေပါပြီ။ ဆရာမရဲ့ လူနာတွေထဲမှာ အသက်(၁၄)နှစ်ကနေ (၁၅)နှစ်ထိ အငယ်ဆုံး လေဖြတ်တာ ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပါပြီ။
၁။ ဆီးချိုရောဂါကြောင့် လေဖြတ်ခြင်း၊
၂။ သွေးတိုးရောဂါကြောင့် လေဖြတ်ခြင်း၊
၃။ နှလုံးရောဂါကြောင့် လေဖြတ်ခြင်း၊
၄။ အရက်သေစာ အလွန်သောက်စားမှုကြောင့် လေဖြတ်ခြင်း၊
၅။ ခါးကြောရိုး နာဗ်ကြောတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် လေဖြတ်ခြင်း၊
စတဲ့ အခြေခံရောဂါတွေဟာ လေဖြတ်ဖို့ အင်မတန်မှ နီးစပ်တဲ့ရောဂါများ ဖြစ်ပါတယ်။
လေဖြတ်ရောဂါကို ပါဠိဘာသာလို သွက္ချာပါဒ-လို့ ခေါ်ပြီး ပက္ခဃာတ-လို့ခေါ်တဲ့ ပါဠိပုဒ်ကနေ သွက္ချာပါဒ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်သွားတာပါ။ ပက္ခ-ဆိုတာ တခြမ်း၊ တပိုင်း၊ တဝက်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး, ဃာတ-ဆိုတာကတော့ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲခြင်း အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွက္ချာပါဒကို ခန္ဓာကိုယ်တပိုင်းသေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် တပိုင်းလေဖြတ်ခြင်းရောဂါ-လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
လူတယောက် ပထမဆုံး လေဖြတ်ပြီဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေး သက်သောင့်သက်သာ အရင်ထားရပါမယ်။ ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ် (Cerebral Infarct)လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက် (Cerebral Haemorrhage) လို့ လေဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေဖြတ်တဲ့ဝေဒနာဟာ တကြိမ်၊ တရက်တည်းနဲ့ ပြီးမသွားပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးမှုဟာ နည်းနည်းနဲ့ ရက်ဆက်ပြီး ပိုပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ-ပထမရက်မှာ ပါးရွဲ့၊ မျက်လုံးပြူးတယ်ဆိုရင် နောက်ရက်မှာ လက်မြှောက်မရ၊ နောက်ရက်မှာ ဗုန်းဗုန်းလဲ စသည်ဖြင့် နောက်ဆုံးကျမှ တကယ်ကို ပီပီပြင်ပြင် လေဖြတ်တဲ့ (Completed Stroke) ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်၊ တတိယအကြိမ်မြောက် လေပြန်တယ်၊ လေဖြတ်တယ် ဆိုတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
လေဖြတ်ရောဂါမှာပဲ ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တချို့က ပါးတခြမ်းရွဲ့၊ မျက်စိမှိတ်မရ၊ နှုတ်ခမ်းပ်ိတ်မရ ဖြစ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့ အနံ့များထွက်တယ်။ တချို့ လျှာပဲလေဖြတ်တာ လျှာစောင်းသွားတယ်။ လျှာတိုဝင်သွားတယ်။ စကားမပီဘူး။ တချို့က ကိုယ့်နာမည်ကအစ အကုန်မေ့ကုန်တယ်။ ပြန်မပြောတတ်တော့ဘူး။ တချို့ သွားရည်တွေ ကျတယ်။ ငိုတယ်၊ ရယ်တယ်၊ ဘယ်ခြေ-ညာလက်၊ ညာခြေ-ဘယ်လက်၊ စသည်ဖြင့် ထောင့်သန်းဖြတ်တယ်။ လေဖြတ်ဝေဒနာဟာ အင်မတန်ဆိုးဝါးပြီး လူ့သက်တမ်းကိုလည်း ဆုတ်ယုတ်စေတဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နေကောင်းကျန်းမာနေစဉ်မှာ လေဖြတ်ရင် ဖြတ်ပါစေဆိုပြီး ဖြစ်သလိုနေထိုင်လို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်ဘယ်လိုပုံစုံမျိုးနဲ့ လေဖြတ်မယ်ဆိုတာ ကြိုမသိနိုင်တဲ့အတွက် လေဖြတ်စေနိုင်မယ့် အကြောင်းရင်းကို သတိထားနေထိုင် ဆင်ခြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာများသည် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ထားမိစရာ ကောင်းလှပါသည်။ ထိုသို့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ထားလိုက်ပါက လေဖြတ်ရောဂါဆိုးကြီး ရောက်လာကာ ဒုက္ခပေးခြင်း ခံရပါတော့မည်။ လေဖြတ်ဝေဒနာ
ပျောက်ကင်းဖိ်ု့အတွက် ဆေးကောင်းတလက်၊ ကုသသူ ဆရာတယောက်ကောင်းနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။
၁။ လူနာကိုယ်တိုင် ရောဂါပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ လိုတယ်။
၂။ လူနာစောင့်မှ လက်ကလေးလှုပ်လိုက်ပါဦး၊ ခြေလေးလှုပ်လိုက်ပါဦး စသည်ဖြင့် အနားမှ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် သတိပေးလှုပ်ရှားခိုင်းနေရမယ်။
၃။ မိသားစုမှ လူနာပေါ် နားလည်မှုနဲ့ စိတ်ရှည်စွာ ဆက်ဆံရပါမယ်။
၄။ ကုသသောဆရာကောင်း ဖြစ်ရပါမယ်။
၅။ မိတ်သင်္ဂဟနှင့် အမြဲတွေ့ဆုံစေပြီး ဝိုင်းဝန်းအားပေးစကား ဆိုရပါမယ်။
အမျိုးသမီးများ အင်္ကျီလက်ပြတ် အမြဲဝတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ပြန်ကောင်းလာတဲ့
လေဖြတ်ဝေဒနာရှင်တဦးဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းကို အသက်ခန္ဓာရှိသရွေ့ လက်မလွတ်သင့်တော့ပါ။ စိုးရိမ်သောက ဒေါသနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လျှော့ပြီး သာသနာရေး၊ လူမှုရေး၊ အများအကျိုးလုပ်ဆောင်ရင်း ကျန်ရှိတဲ့ဘဝအတွက် အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၄၀-နှစ်ရောက်ရှိသော အမျိုးသား အမျိုးသမီးတိုင်း နေ့စဉ်ပုံမှန် လမ်းလျှောက်ပြီး တနေ့ ထိုင်ထ (ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုင်ချ၊ ပြန်ထ-မြန်ဖို့မလိုပါ) ၁၀-ကြိမ်မှ အကြိမ် ၃၀၊ အကြိမ် ၃၀-မှ အကြိမ် ၁၀၀-ထိ တိုးတိုးပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
(ဂမ္ဘီရ ၂၀၀၆-ခု ဧပြီလ) http://www.mawluu.com/2011/10/blog-post_8223.html မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:59 AM